WLDH Horizontal Ribbon chisanganiso - China Changzhou Daming Pharmaceutical Equipment
Working neBhaibheri muchina uyu rinoumbwa mudziyo, sikuruwa inokurudzira paddles uye Transitional zvikamu; ari sikuruu chovha kazhinji akaita kupinda 1 rukoko kana 3 akaturikidzana, kuruvanze sikuruwa wekuita ndiwo mashoko pakati kubva kumativi maviri, uye romukati paiva sikuruu rinopa mashoko kune mativi maviri kubva pakati, kuti kubva convection vaiitawo . Zvinoitwa Big coefficient rokukwidza, duku nharaunda. Zvakaoma kuchenesa kana rinoshandiswa kusanganisa viscous kana namira zvinhu. ...
muchina uyu rinoumbwa mudziyo, sikuruwa inokurudzira paddles uye Transitional zvikamu; ari sikuruu chovha kazhinji akaita kupinda 1 rukoko kana 3 akaturikidzana, kuruvanze sikuruwa wekuita ndiwo mashoko pakati kubva kumativi maviri, uye romukati paiva sikuruu rinopa mashoko kune mativi maviri kubva pakati, kuti kubva convection vaiitawo .
Big coefficient rokukwidza, duku nharaunda.
Zvakaoma kuchenesa kana rinoshandiswa kusanganisa viscous kana namira zvinhu.
The Ribbon chisanganiso rinoshandiswa vaiitawo pamusoro viscous kana namira upfu zvinhu, kana vaiitawo kuti upfu iyo inoda kuwedzera emura, namatidza zvinhu. Zvichakadai, nekuti zvakaoma kuchenesa viscous zvinhu, muchina ndiye akakodzera vaiitawo nyaya, apo goho riri guru uye hapana chikonzero displacing zvinhu zvakasiyana-siyana kakawanda.
yakavhenganiswa chitsama / batch mangé
Cherechedza: The zvigadzirwa-vataurwa pamusoro apa inogona kuitwa muna carbonaceous simbi C kana Stainless simbi P
Previous: SYH Series Three ndeiya yakaita chisanganiso
Next: VHJ dzino chisanganiso
Nereza Aisanganisa Machine
mupfudze kuvhenganisa Machine
fetiraiza Powder Aisanganisa Machine
High vakarongeka Pharmaceutical Aisanganisa Machine
Laboratory Rubber kuvhenganisa Machine
Pharmaceutical Aisanganisa Machine
Pharmaceutical Powder Aisanganisa Machine
powder Aisanganisa Machine
Rapid Pharmaceutical Aisanganisa Machine
Rubber Aisanganisa Machine
Tank Model Aisanganisa-Machine
muchimwiro Type Aisanganisa Machine
Wldh Series Horizontal Ribbon chisanganiso
VHJ dzino chisanganiso